Ihe ntụgharị vidiyo kacha mma maka gam akporo | Gam akporosis
Ihe ntụgharị vidiyo kacha mma maka gam akporo
O doro anya na nke ahụ Anyị na-adabere na Android Smartphones anyị, ma maka ọrụ na oge ezumike. Nke a bụ ya mere anyị ji achọkarị ngwaọrụ ziri ezi, nke ruo obere oge gara aga anyị nwere naanị na desktọọpụ sistemụ dịka Windows, Linux ma ọ bụ MAC. Nke a bụ ikpe na ndị ntụgharị vidiyo na nke ọdịyo
Ngwaọrụ anyị ewetara gị taa bụ site n'echiche anyị, ndị ikpeazụ maka vidiyo vidiyo kacha mma maka gam akporo. Na ha, ị chọkwaghị enyemaka nke kọmputa nkeonwe tọghata vidiyo na faịlụ ọdịyo na usoro anyị chọrọ. Ọ ga-ezuru gị smartphone, ma maka ojiji nkeonwe ma ọ bụ maka ọrụ.
1 Inverse.AI Video Ihe Ntụgharị, nke kacha mma video Ihe Ntụgharị?
2 Mgbapu VidCompact
3 VidSoftLab Video Ihe Ntụgharị
4 Mgbanwe Mgbasa ozi maka gam akporo
5 Download Media Ihe Ntụgharị n'efu maka gam akporo
6 All formats na-akwado Media Ntụgharị maka gam akporo
6.1 Formdị vidiyo:
6.2 Formdị ọdịyo:
Inverse.AI Video Ihe Ntụgharị, nke kacha mma video Ihe Ntụgharị?
Ihe ntụgharị vidiyo, Compressor MP4, 3GP, MOV, AVI
Anyị na-amalite site na otu ngwa anyị ntughari ọkacha mmasị maka otu o zuru ezu. Enwere ọtụtụ ihe yiri ya, mana nke a bụ nke na-arụ ọrụ kachasị mma ma na-enye nsonaazụ kacha mma. Aha ya na-ahapụ ihe ọ bụla n'echiche: Ihe Ntụgharị vidiyo, nke a na-akpọsakwa dị ka Compressor Video Converter. Nke ahụ bụ ịsị, ọ ga - enyere gị aka ịgbanwe usoro vidiyo ọ bụla naanị, kamakwa ịpịkọta ya ma ọ bụrụ na ịchọghị oke mma mana ọ ga - ewe obere ohere.
na usoro nke ọ na-arụ ọrụ na mbipute ya n'efu bụ dị nnọọ iche: AVI, Flv, MKV, MOV, MPEG, MPG, MP4, MTS, M4V, TS, VOB, WMV na 3GP. Ọ bụrụ n'ịhọrọ pro mbipute, ị nwekwara ike ịrụ ọrụ na F4V, WEBM na WMV. Na mgbakwunye, na ụdị ọ bụla, ọ na-enye ohere -enye gị ohere gbanwee ihe ụta mpikota onu faịlụ.
Ma audio, usoro ntụgharị ndị ndị okike ha mere ka a na-akpọsa Inverse.AI bụ AAC, AC3, FLAC, MP3, M4A, OGG, WAV. Ọ bụ ezie na anyị enyochala na ọ nwekwara ike tọghata WhatsApp OPUS faịlụ MP3 na ọtụtụ ndọtị ndị ọzọ. Ọ nwekwara ike mpikota ọdịyo na CBR, VBR na ụfọdụ koodu nzuzo.
Ihe ọzọ mere o ji nwee ezigbo ogo bụ na ọ dịkwa -enye gị ohere ewepụtụ vidiyo na audios. Na mgbakwunye na tọghata video ka ọdịyo naanị ọ bụrụ otu achọrọ. Ihe a niile sitere na a nnọọ kensinammuo isi ihuenyo, nke na-enye gị ohere ịhụ ihe niile n'otu anya, na-enweghị ịchọ site na menu.
VidCompact: Onye nchịkọta vidiyo
N'adịghị ka na aga na ngwa, na Mgbapu VidCompact a na-eji utu aha na-eduhie eduhie ejiri ya kpọsaa. N'ihi na mfe agbaghara mgbe ị na-achọ onye ntụgharị vidiyo na Google Play. Ọ na-egosi dị ka Video ka MP3 Ihe Ntụgharị, Video Compressor, nke na-adịghị ebi ndụ ruo ike nke ngwa a.
N'ime oge ha na-agbakwunye ọrụ karịa, ruo mgbe aha ha pere mpe maka ha. Na mgbakwunye na n'ịtụgharị ha ka ha MP3 audio, ọ bụ a otutu video ka MP4 usoro ihe ntughari (nke kachasị eji). Nke na-agbakwụnye mgbakwunye dị mfe, nke bụ ihe kacha mkpa maka ndị na-achọghị ọgbaghara na ọtụtụ nchịkọta nhọrọ na ọtụtụ nhọrọ.
Nanị họrọ MP4 akakabarede na ndepụta ga-emeghe na-egosi vidiyo na ụdị ndị ọzọ ị nwere na mkpanaka gị. Ya bụ, ị gaghị achọ ha site na folda iji gbanwee ha nke nta nke nta, n'ihi na achọpụtara site na ngwa ahụ n'onwe ya. Ya mere, ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ iji tọghata MP4 enweghị etinye aka, a free ngwa bụ gị mma nhọrọ.
I nwekwara ike ịga na Versiondị VIPỌ bụrụ na ị chọrọ bee na mpikota onu videos, mkpakọ na blocks 10 ruo 10 ma ọ bụ tọghata ndị ọzọ formats ndị ọzọ karịa MP4. Ma anyị anyị anaghị akwado ya, n'ihi na nke ahụ bụ ụdị ngwa dị ka nke anyị gosipụtara n'elu bụ maka.
VidSoftLab Video Ihe Ntụgharị
Rịba ama na nke a video format Ntụgharị bụ nnọọ akpali n'ihi na ya usability. N'ihi ya, anyị na-etinye ya na ndepụta a ka i wee chọta ndị kasị mma video Ihe Ntụgharị gị. Ọ bụ ngwa VidSoftLab ọkara ịnyịnya site na abụọ ndị gara aga. Ọ dị mfe iji ma n'otu oge ahụ ọ zuru ezu.
Ma video edezi, Ọ na-enye ohere ewepụtụ ha dị ka ngwa ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọ na-enyekwa ohere nke tinye ha ego, nyefee ha nwayọ nwayọ y jikota otutu. Functionsfọdụ ọrụ nwere ike ịtọ ezigbo ụtọ.
E wezụga ndị a ngwa atụmatụ, ọ bụ ezigbo video ndọtị Ntụgharị. Ikekwe ọ bụghị dị ka zuru ezu na ọnụ ọgụgụ nke usoro ọ na-anabata dị ka Inverse.AI Video Ihe Ntụgharị, ma na a-akpali nnọọ mmasị kwukwara nhọrọ: họrọ usoro ikpeazụ nke vidiyo site na ngwaọrụ nke a ga-eji ya. Mgbe ahọpụtara vidiyo ahụ, ọ ga-emepe igbe dị na ya: Android, Apple, Windows, Blackberry, MPEG, MP4, 3GP, Mkv, Flv, Sony na Xbox. Niile efu ma e wezụga Apple, nke chọrọ ịkwụ ụgwọ maka mbipute Premium, ọ bụ ezie na ọ na-adịkarị ọnụ ala ma bụrụ maka ndụ.
N'ezie ọtụtụ n'ime ha bụ naanị MP4, mana ọ na-agbakwunye ụfọdụ mfe maka ndị na-amachaghị ihe ndọtị faịlụ vidiyo. Obi abụọ adịghị ya, ezi nhọrọ ịhapụ nkà na ụzụ ma lekwasị anya n'ihe dị mkpa. Mkpakọ vidiyo na mkpebi dị elu bụ naanị maka ụdị adịchaghị mma, yabụ maka nke ahụ anyị na-akwado ngwa Inver.AI Video Converter.
Mgbanwe Mgbasa ozi maka gam akporo
Ngwa na-aza aha nke Ihe Ntụgharị Ọ bụ ngwa na, olee otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, dị na Google Play Store. Nke ahụ bụ, ụlọ ọrụ gọọmentị ngwa ngwa maka gam akporo ị ga-enweta site na ịpị igbe m hapụrụ n'okpuru usoro ndị a. Can nwere ike pịa na Download ngalaba ma ọ bụ i scanomi ndị QR code na-webatara.
Download Media Ihe Ntụgharị n'efu maka gam akporo
Developer: onye na-eme egwuregwu
Ihe ntụgharị mgbasa ozi maka gam akporo bụ onye nyocha ọzọ maka ihe ntụgharị vidiyo kacha mma, n’ihi na ọ bụghị naanị ntụgharị ntụgharị dị mfe. Na mgbakwunye na ime nke a n'ụzọ dị mfe site na ịpị bọtịnụ, enweela nhọrọ na ọkachamara. Dịka ọmụmaatụ, gbanwee vidiyo na MP4 ma ọ bụ ọdịyo ma ọ bụ vidiyo na MP3 iji wepụ naanị ụda.
Ọ na-ekwe na-ahọpụta niile parameters nke akakabarede na-rụrụ, parameters dị ka ụdị nke video ma ọ bụ ọdịyo format na-ghọrọ. O nwekwara ọdịyo-naanị ripping, audio trimming, na ọbụna video edezi ngwaọrụ bee ma ọ bụ ọbụna tụgharịa ya na ihe ọ bụla direction na ị chọrọ.
Ihe nchọgharị faịlụ vidiyo na vidiyo
Ya mere, ị nwekwara ike bee / ewepụtụ a media faịlụ, ma ọ bụ wepụ ọdịyo na-eme ka a ringtone, ị nwere ike bee ma bugharia video mmepụta, ị nwere ike ezipụta parameters gụnyere / video audio bit ọnụego, mkpebi, etiti ọnụego na ọbụna audio sample ọnụego.
All formats na-akwado Media Ntụgharị maka gam akporo
M4A (AAC naanị ọdịyo)
3ga (naanị AAC-ọdịyo)
Oga (FLAC-audio naanị)
Obi abụọ adịghị ya, ngwa na-adọrọ mmasị nke ukwuu, anaghị akwụ ụgwọ ma dịkwa mfe iji dị ka m na-egosi gị na vidiyo agbakwunyere na m hapụrụ gị na mbido akwụkwọ a, nke m na-akụzi etu esi eji ngwa ahụ na ọrịa .
Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ naanị tụgharịa vidiyo, na njikọ ahụ m hapụrụ gị ka m kọwaara ya otu esi eme ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ihe ntụgharị vidiyo kacha mma maka gam akporo
Ndewo androidsis m dere gị msg
Zaghachi Luisa Rubiano
OxygenOS 10.3.3 na nke ikpeazụ ya ugbu a maka OnePlus 6 na OnePlus 6T